"Shiya. Philippines "- ngesithombe isignesha enjalo kungaba nomhlobiso uyakufanelekela kunoma ingobo yomlando umndeni. Kungani? I imfuneko lokhu empeleni kuyinto eningi. Ojwayele eSpain, e-Italy ne-Thailand, ngokuvakashela izikhathi eziningana eGibhithe, Turkey kanye Tunisia, sizama ukuthola iziqondiso ezintsha bona.
Lokho okukhethayo uwela Philippines, isithombe okuyinto iminyaka eminingi ubelokhu nesembozo omagazini ecwebezelayo travel ezibizayo.
Isigaba 1. Ulwazi jikelele mayelana lizwe
Akubona bonke ngisho ukuthi kuyinto izwe elikhulu ihlukaniswe iziqhingi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa, walahlekelwa kakhulu olwandle nezilwandle.
Ukuphathwa tingentiwa inombolo eqonde kakhulu - iziqhingi eziyisikhombisa nekhulu nesikhombisa. Bonke abanobuntu obuhlukile. Kukhona yonke into kusuka imvelo isetshenzwe ziphethe inala amakilabhu, ema-disco nezinye ukuzijabulisa.
Ngokuvamile, i-Philippines agcwele exoticism. Abavakashi kakhulu bakhangwa surfing kanye scuba diving, kanye zibabaza athuthukile resort amadolobha, ukudla okumnandi, isimo sezulu, flora sendawo ezilwaneni nasezimileni.
Isigaba 2: Indlela yokufinyelela lapho uya khona?
Ukuze Russia, izindiza ezivela eMoscow eManila (siqala nezinguquko), ahlinzeke ezimbili izindiza omhlaba anothile: KLM futhi Korean Air.
Indlela lokhu kwenziwa, ngoba ePhilippines iholide abakwazi eziheha izinkulungwane, ngisho namakhulu ezinkulungwane abahambi abavela emhlabeni jikelele?
Ngokusho abahambi ongumakadebona, ukudluliswa esingesihle kubhekwa Kudokhu eside e-Amsterdam.
Kukhona kungenzeka ukushintsha izindiza e Seoul. Izindiza Qatar Airways (nge-Doha ukuze Cebu noma Manila) zibhekwa kuwusizo kakhudlwana, t. K., sazi semikhumbi, isikhathi indiza kuyinto amahora 17 kuphela.
Futhi kunesinye yenethiwekhi, Emirates Airlines (nge-Dubai eManila). Isikhathi sokuvakasha uma sicabangela nokuxhumana okunjalo - 18 amahora.
Kusukela Alma-Ata izivakashi ngokuvamile zihamba nge-Dubai.
Ukraine kanye Belarus abazenzi izindiza Qatar Airways futhi KLM nokuxhumana nge-Dubai, Amsterdam kanye Bangkok.
Isigaba 3. Ulwazi olubalulekile: zezindiza, visa, amasiko
Yini okudingeka uye kuzo ngaphandle eseholidini ePhilippines? Map, ikhamera, ukugeza suit. Futhi, mhlawumbe, iqoqo ulwazi oluwusizo, okumele abe ehlome. Ngokwesibonelo, mayelana nendlela yokufinyelela lapho uya khona futhi kulandelwe lokho imithetho kufanele, bewela umngcele wezwe langaphandle.
Nakuba iPhilippines aqukethe iziqhingi ezingaphezu kuka-7000, cishe wonke izivakashi ufike lapha ngendiza. Ethandwa kakhulu ngamazwe zezindiza Philippine uthathwa Angeles, Cebu, Laoag, Zomboang, Davao, eManila wafike Kalibo.
Ukukhuluma wenduduzo, kuyaqapheleka njengoba sezindiza elula kakhulu Cebu itholakala inhliziyo zonke kuleli qoqo leziqhingi.
Ukuze isabelomali abahambi ivumelane zezindiza kanye okuthiwa i-Clark Diosdado Macapagal, zingabantu Angeles.
Kodwa isango emoyeni esibizwa Ninoy Aquino njengelinye lamazwe okubi kakhulu, nakuba ezisetshenziswa abahambi kakhulu.
Izakhamuzi Russian Federation, kulandela eholidini ePhilippines (ezokuvakasha lapha unyaka nonyaka eba kuphela), asidingi i-visa. Nokho, inkathi lokuphumula ngesikhathi esifanayo kumele singeqi izinsuku ezingu-30.
Ngenisa futhi zokuthumela izimali zakwamanye amazwe uvunyelwe eziningi angenamkhawulo. Futhi akuvumelekile nentela yokungenisa mahhala:
250 amagremu ugwayi;
Zithengise izidakamizwa nezibhamu nokuthengisa ngokulingisa kwakhe izifundo, izithombe zobulili ezingcolile nezinto ngonya futhi anti-isimo uhlamvu, izithelo, imifino nezitshalo nursery isitokwe imvume ekhethekile, izilwane zasendle nezinyoni, kwakudala ngaphandle noma yimaphi amadokhumenti, izinto zegolide, izinyo lendlovu, nokhuni (okungelona olwabo, okuyinto elicacisiwe amasiko isimemezelo) ukuze Ukungeniswa akuvumelekile.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukuze athathe izinto zokuhloba futhi kwakudala aphume ezweni, kumele abe nesitifiketi ekhethekile.
Isigaba 4: Lapho ukuya eholidini?
Isimo sezulu ezindaweni ezishisayo ePhilippines. Lokhu kusho ukuthi-ke has izici zayo siqu: lokushisa eliphezulu kanye nomswakama unyaka wonke. Lokhu kufanele sikhumbule uma uhlela uhambo lwakho ePhilippines.
Ngokuvamile, kukhona zonyaka ezimbili:
liyana (ngo-May kuya ku Lwezi);
ezomile (Disemba ukuze Apreli).
Isikhathi zinomswakama isikhathi esiningi kuba ngo June-Okthoba, kodwa izindawo zokungcebeleka, okuyinto zitholakala ngaphakathi kuleli qoqo leziqhingi, hhayi kakhulu ziniselwa yimvula. Ngakho-ke, "Lizokuna Philippines" - isithombe kuqinisekisiwe ukuthola abahambi kokuvakashela lizwe kule sizini.
Amazinga isilinganiso in Manila - kusukela +25 ukuba +29 degrees Celsius.
Ngokusho abahambi ebona, kungcono ukuvakashela indawo ngoDisemba noMeyi. Kodwa ungakhohlwa mayelana isishingishane ePhilippines. isiqongo yabo ngokuvamile kwenzeka ngo-July-Okthoba, kodwa, isimiso, zimiswe noma nini bangakwazi.
Isigaba 5. Ikhishi, zokudla
cuisine Traditional ziyojabula izivakashi Philippines. izitsha Photo yoqobo ukuhlobisa ngombiko wakho iholidi. Ukutholakala imenyu into engavamile ngisho ongabazi inikezwe. Ngokuvamile, ingxube okuhlukahlukene entshonalanga nasempumalanga: Chinese, iSpanishi, Malay.
Ilayisi wakhonza njengendlela dish side kuya izifundo main, ezilungiselela kwasolwandle kaningi. By endleleni, uqaphele ukuthi uma izivakashi uyala ukudla abanye, yena, bavunyelwe ukukhetha ekuwulungiseleleni. Izindlela ethandwa kakhulu - ethosiwe Hlobisa in sauce sweet and omuncu noma eyosiwe nge garlic ibhotela.
Iziphuzo ezibhekwa yendabuko - kuyinto lukakhukhunathi - "beech", ayo asanda isibambo, ikhofi abandayo kanye itiye, iziphuzo ezibandayo. Kodwa iningi rum oludakayo ethandwa Filipino, ubhiya zendawo, iwayini esekelwe lukakhukhunathi iwayini lamasundu "Lambonak".
Isahluko 6. Yini okudingeka qiniseka ehlukahlukene uhambo lwakho ePhilippines?
Vakashela ithempeli kwase-Shayina e Cebu futhi uthole ukuthi uma isifiso akho zigcwaliseka.
Hlelani epikinikini azungeze ichibi emangalisayo enhle eMindanao.
Bheka Hills Chocolate, edumile emhlabeni. Basuke etholakala esiqhingini Bohol.
Buka cockfights, ukukhumbula ngesikhathi ezinye izinto kangangokuthi abanasikhathi cishe wonke amadolobhana futhi ngamaSonto kuphela.
Ride ngomfula eyehlayo komhlaba kanye kubhekwa ukukhangana main le planethi, esiqhingini ePalawan.
Vumela master ukubamba massage kazwelonke.
Futhi ekugcineni, uma uya ePhilippines, amabhishi isithombe ungakhohlwa ukwenza nakanjani.
Edmonton (Alberta): umlando, nokuzwa, amaqiniso athakazelisayo
Iziqhingi elihle Greece: neCorfu
Okumangazayo Area Texas - "kaJakobe"
Amagilebhisi izindaba ezinhle: incazelo ezihlukahlukene kanye kwebalingisi of